Bathuka izanya ngenxa yezinja | IOL Isolezwe
Bathuka izanya ngenxa yezinja
Isolezwe / 28 February 2013, 10:56am / NOKUBONGWA PHENYANE
UNKK THOKOZANI Gasa wakwa Swayimane ongugogo ka- Okuhle Manzi (okwesi-shuthekiwe) odliwe yizinja uthi kusenzima nokuyikholwa lento eyenzekile kumzukulu wakhe
U- UNKK THOKOZANI Gasa wakwa Swayimane ongugogo ka- Okuhle Manzi (okwesi-shuthekiwe) odliwe yizinja uthi kusenzima nokuyikholwa lento eyenzekile kumzukulu wakhe OKUHLE Manzi waKwaSwayimane odliwe izinja.
27/02/13 DURBAN: UNKK FIHLEKILE Phakathi ungumninikazi wenye yezinja okuthiwa zibulale ingane KwaSwayimane. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
ASEHLALELE ovalweni amalungu omphakathi aseSikhaleni, KwaSwayimane, ngemuva kwesigameko esishaqise abaningi sokufa kwengane enephulwe yizinja komakhelwane.
Abanye bomphakathi bathuka izanya njengoba inja eyodwa kulezi ezibulele ingane ibalekile kanti kuthiwa iyabonakala ehlathini.
Isidumbu sika-Okuhle Manzi (3) sisale simanephunephu emuva kokudliwa yizinja unina ekade emshiye yedwa ephelezele enye ingane yakhe iyogibela iya esikoleni ngoMsombuluko.
Lezi zinja kuthiwa abanikazi bazo bebejwayele ukuhamba nazo beyozingela izinyamazane.
Ugogo ka-Okuhle uNkk Thokozani Gasa, uthe bamangele kakhulu ngalesi sigameko naye selokhu aba khona uyaqala ukusibona ngamehlo.
“Mina bengiqala ukubona into enjena. Angazi lezi zinja zazingenwe yini ngoba ingane bezihlala nayo futhi azikaze zikhombise bungozi ngisho kithina bantu abadala,” kusho uNkk Gasa.
Uthe ngesikhathi ingane ilandela unina akanakanga ukuthi ayibuyi ngoba wamuzwa eyixosha.
“Ngacabanga ukuthi uzingenele kamakhelwane njengoba ujwayele ukukhala uma embuyisa emuva kodwa kulokhi akaze akhale. Ngezwa ngomakhelwane sebememeza sekuqhuma isililo la enhla komuzi uma ngifika ingane ayisabonakali, sayithatha sayigoqa ngezingubo sayihambisa esibhedlela,” kuchaza uNkk Gasa.
Uthe abanankinga ngokwenzekile, ngeke babazonde noma baxabane nomakhelwane babo njengoba lokhu kungesona isigameko samabomu.
Umnikazi wenja eyodwa kulezi ezintathu ezibulale le ngane uNkk Fihlekile Phakathi, uthe kudala etshela abanikazi bezinja ezigcwala kwakhe ukuthi abazilande.
Uthe naye kamuva nje ubesezesaba njengoba bezike zigcwale umuzi wakhe angazi ukuthi zifunani.
“Ngibuhlungu kakhulu ngale ngane njengoba ibizihlalela nami ihamba yodwa singasabi lutho. Lezi zinja bezilandela eyalayikhaya njengoba bekuyiyona eyesifazane. Zaqala ukuhlala layikhaya ngabuza ukuthi ezakuphi ngathola eyodwa ngahamba ngayotshela umnikazi wayo ukuthi azoyilanda wathi uzothumela abafana kodwa abangafika,” kusho uNkk Phakathi.
Uthe nangesikhathi bethola umyalezo wokuthi izinja sezidle ingane yena wayecabanga ukuthi basho imbuzi kodwa wafika wamangala uma sebethola ukuthi u-Okuhle.